बालविवाह रोक्न बिबाह दर्ता पहिले गर्नुपर्छ : अल्बिना प्रविन - Purbeli News
बालविवाह रोक्न बिबाह दर्ता पहिले गर्नुपर्छ : अल्बिना प्रविन
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष ०७, २०७५ समय: २०:४२:२६
एसियायी मुलुकमा बिद्यमान बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन समारोहमा नेपालको तर्फबाट सुनसरी इनरुवा नगरपालिका ९ बबियाकी युवा अभियन्ता अल्बिना प्रविन सहभागी भएकी छन् । प्लान इन्टरनेसनल एसिया क्षेत्रीय कार्यालयले थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै १७ वर्षीय अल्बिनाले नेपालमा बालविवाहको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । अल्बिनासंग पूर्वेली न्युजका इनरुवा सम्बादाता मिकाइल आलमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एसियाली मुलुकमा विद्यमान बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी समारोहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुँदा तपाईंले नेपालमा बालविवाहको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो ?
यति कम उमेरमा बालविवाह र महिला अधिकारको बारेमा आवाज उठाउने प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो ?
तपाईं मुस्लिम समुदायबाट हुनुहुन्छ सुनसरी सहित नेपालमा मुस्लिम समुदायमा बालविवाहको अवस्था कस्तो रहेको पाउनु भएको छ ?
सुनसरीमा मात्रै नभई हाम्रो देशभरनै बालविवाह भैरहेको छ । हामीले अनुसन्धान गर्दा खासगरी पिछडिएका समुदायमा बालविवाह बढी भैरहेको अवस्था यथावत छ । केहि अघिसम्म मुस्लिम समुदायमा बालविवाह हुने क्रममा वृद्धि भएपनि पछिल्लो समययता चेतनाको स्तरमा वृद्धिसंगै कमि आएको जस्तो लाग्छ । नेपालमा मुस्लिम समुदाय मात्रै नभइ अरु अरुमा समुुदायमा अहिले पनि बालविवाह भैरहेको यथार्थ कुरा हो ।
खासगरी ग्रामीण भेगमा सहरी क्षेत्र भन्दा बढी बालविवाह र महिला माथि हिंसाका घटना बढेको उदाहरणहरु छन् यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
तपाईंको बुझाईमा नेपालमा बालविवाह गरिनुको कारणहरु के के हुन ? र न्यूनीकरण गर्नका लागि के के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?
बालविवाह हुनुको विभिन्न कारणहरु छन् । जस्तै शिक्षा कमी, गरिबी, दाइजो प्रथा, अवसरको कमी, असमानता, चेतना अभाव, बेरोजगारी, पढ्ने उमेरमा गरिने प्रेम, देखासिकी इत्यादि कारण बालविवाह भैरहेको छ । जहाँ सम्म मलाई लाग्छ बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकालेे गर्नुपर्छ, सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा सरकारले विवाह पछि भन्दा पनि विवाह अगाडि नैै पहिले विवाह दर्ता गराउनु पर्छ । जसले गर्दा विवाह गर्ने जोडीको वास्तविक उमेर पत्ता लाग्छ । स्कुल तहबाट बालबालिकाहरुलाई स्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्य बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ, पढाईमा सहयोग छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ, क्षमता विकासको लागि तालिम दिनुपर्छ, बालबालिका लाई समय समयमा उत्प्रेरित गराउने तालिम दि राख्नुपर्छ, अभिभावक,विद्यार्थी र परिवारका अन्य सदस्यसंगै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गराउनु पर्छ जसले समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सकिन्छ । बालिकालाई खेलकुदमा अगाडि बढाई उत्कृष्टहरु लाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बालविवाह र महिला अधिकारको बारेमा आवाज उठाईरहदा कतिको चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ?
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धि समारोहमा सहभागी हुँदा के के नयाँ कुरा सिक्न पाउनुभयो ?
अबको योजना के छ तपाईंको ?
अहिले म बिबिएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छु । आगामी दिनमा पढाईका साथै बालविवाह र महिला माथि हुने हिंसाको बारेमा काम गर्छु । आशा छ आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि, राजनितिकर्मी,संचारकर्मी,लगायत सबैको
साथ,सहयोग,सल्लाह, सुझाव रहिरहन्छ । सबैसंग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा तपाईंजस्तै केहि गर्न चाहने विद्यार्थी भाईबहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हिंसा सहनु पनि अपराध हो । यदि कोहि कसैले तपाईंको अधिकारको हनन गरेको छ भने प्रतिकार गर्नुस् । पढाईका साथै आफूलाई रुचि लागेको काम गर्नुस् । आफू भन्दा ठुलोको सम्मान र सानोलाई माया गर्ने बानीको विकास गर्नोस् । कोही कसैले हिंसा गरेको छ वा पाउनु भएको छ भने नजिकैको प्रहरीलाई जानकारी गर्नोस् । हामी तपाईंको साथ दिन्छौं ! प्रश्तुती ः मिकायल अालम